सडकमा ‘जाम’ छ, घर बस्नेलाई लकडाउन ! – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख २६ गते १६:४६
शुक्रबार काठमाडौ‍ंका सडकमा गाडीका ताँती। तस्विर- साैरभ रानाभाट/हेल्थपाेस्ट
कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागिभन्दै देशमा चैत ११ गतेदेखि लकडाउन जारी छ।
सरकारले कुनै ‘बिकल्प’बिना लकडाउन बढाइरहँदा मानिस भने सडकमा निस्किन थालेका छन्। लकडाउन बढिरहँदा आजकल कहिलेकाहीँ त सडक जाम नै हुन्छ।
त्यसको असर उपत्यकाका सडक र बजार क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। पछिल्ला दिनमा सडकमा पहिलेको तुलनामा सवारिसाधनको चाप बाक्लो देख्न सकिन्छ। मान्छेको आवागमन पनि बाक्लै हुन थालेको छ।
यत्तिमात्र होइन कोरोनाबाट जोगिन भन्दै मानिस जिल्ला जिल्लाबाट उपत्यका भित्रिन थालेका छन्। केही दिन पहिले उपत्यकाको बसाई असज भएको भन्दै थुप्रै मान्छे बाहिरिए पनि पछिल्ला दिनमा भने फेरि मान्छेको उपत्यका भित्रिने क्रम बढेको हो।
राजधानी सुरक्षित नभएको भन्दै गाउँ फर्केकाहरू फेरि काठमाडौं भित्रिन थालेका हुन्। उनीहरू विभिन्न बहानामा काठमाडौं भित्रिरहेका छन्। नागढुंगा प्रहरीका अनुसार यसरी उपत्यका छिर्नेमा कोही अस्पतालको नाममा, कोही काठमाडौं घर भएर फर्किएको बहानामा त कोही आफन्तकोमा गएर उतै रोकिनु परेको बहाना देखाएर फर्कि रहेका हुन्।
कति पय मान्छेको उपत्यका भित्रिने काइदा भने फरकै छ। मालबाहक तथा अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्ने सवारीसाधानमा समेत दैनिक हजारौं सर्वसाधारण उपत्यका भित्रिरहेका छन्।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार दैनिक एक हजार हाराहारीमा मालवाहक सवारी आउँछन्। प्रत्यक सवारीमा तीन जनासम्म सर्वसाधरण भित्रिरहेको महाशाखाले जनायो। यसरी हिसाव गर्दा दैनिक तीन हजारको हाराहारीमा उपत्यकामा मानिसहरू भित्रिरहेका छन्। तर, यसतर्फ सरोकारवाला निकाय भने बेखबर जस्तै छन्। ती बाहेक लुकिछिपी भित्रिनेहरुकाे पनि कमी छैन।
बाहिरबाट राजधानी भित्रिले मुख्य नाका नागढुङ्गा, फर्पिङ, जगाती साँखु आदि हुन्। उपत्यका प्रवेश गर्ने यी नाकाबाट दैनिक कति सवारी भित्रिन्छन् र ति सवारीमा कति मान्छे भित्रिन्छन्, प्रहरीसँग कुनै रेकर्ड छैन।
प्रहरीले यात्रु बोकेर आउने सवारी साधनलाई काठमाडौं भित्रिन नदिए पनि यसरी लुकिचोरी आउनेहरूलाई भने नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्र्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठका अनुसार मालबहाक सवारीसाधनलाई मात्रै राजधानी प्रवेश गर्न दिइने भए पनि त्यसरी आउने सवारी र मान्छेको डाटा भने लिने गरिएको छैन।
महानगरीय प्रहरी वृत थानकोटका प्रहरी प्रमुख घनश्याम श्रेष्ठका अनुसार पनि नागढुङ्गा नाका हुँदै यात्रु बाहक सवारीलाई प्रवेश गर्न दिइएको छैन। तर, मालवहाक सवारीमा भने सहचालक र सहयोगीको बहानामा मान्छे भित्रिरहेका हुन्। आफूहरूले सोध्दा पनि उनीहरूले गाडिकै स्टाप भएको बताउने गरेको प्रहरीको भनाई छ।
उपत्यकामा पनि बढ्दो चहलपहल
बाहिरबाट भित्रिने मात्र होइन। उपत्यकामा पनि पछिल्ला दिनमा चहलपहल बढ्दो छ। दुई÷तीन दिन यता उपत्यकाका सडकमा सर्वसाधारण तथा सवारी आवागमन बाक्लै देख्न सकिन्छ। लकडाउन जारी नै रहेका बेला डकडाउननै नभएको झल्को दिने गरी सवारी साधन हुइकिँदा रहेको पाइन्छ।
सरकारले अन्य कुनै विकल्पका बारेमा छलफल नै नगरी लकडाउन बढाउँदै लगेपछि सर्वसाधारणहरू बाहिर निस्नि थालेका हुन्। उक्त स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई समेत हम्य–हम्य भइरहेको छ।
प्रहरीले ठाउँ–ठाउँका चेक पोष्टमा पास चेकजाँच गरिरहेका छन्। अनावश्यक रुपमा सवारी हाकिरहेकाहरूको पास पनि जफत गरिरहेको छ। तर, मान्छेको बाहिर निस्किने क्रम रोकिएको छैन।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी माहाशाखा प्रमुख एसएसपी भिमप्रसाद ढकालका अनुसार लकडाउनको थप कडाई गर्न अनावश्यक सवारी हाकेको पाइए पास जफत गर्ने गरिएको छ। एक दुई दिन यता सवारीको चाप बढेको उनी पनि स्वीकार्छन्। आवश्यक पर्ने व्यक्तिको राम्रोसँग पहिचान नै नगरी पास बाढ्दा पनि अहिलेको समस्या आएको उनको भनाई छ।
उनले अहिलेसम्म त्यसरी पासको दूरुपयोग गरेर सवारी हाक्ने २० हजार बढी सवारी चालकलाई कारबाही गरिएको बताए। एसएसपी ढकालका अनुसार प्रहरीले अनावश्यक सवारी हाक्ने २२ सय बढी चालकको पास जफत गरिसकेको छ।
अनावश्यक सवारी हाक्ने चालक मात्र नभएर विनाकाम घर बाहिर निस्किने पैदल यात्रुलाई समेत प्रहरीले कारबाही गर्ने गरेको छ। दैनिक त्यसरी निस्किने करिव १५ सय सर्वसाधारण पनि कारबाहीमा पर्ने गरेको प्रहरीको भनाई छ।
एसएसपी ढकाल उपत्यकामा सवारीको चाप बढ््नुमा ६ वटा कारणलाई प्रमुख कारक मान्छन्। उनका अनुसार हजारौंको संख्यामा पास वितरण गर्नु, उपत्यका बाहिरका जिल्लाले पास दिएका सवारी उपत्यका भित्रिनु, अनलाइनबाट किनमेल गर्नेको संख्या बढ्नु, राहात वितरणमा चल्ने सवारी साधनहरू, बैक तथा वित्तीय संस्था लगायतका सरकारी कार्यालय खुला रहनु, उद्योग, कलकारखानाहरूको सञ्चालन तथा सडक निर्माण कार्यमा प्रयोग भएका सवारी साधनहरू रहेका छन्।
पास नभएका र अत्यावश्यक काममा जानुपर्ने सर्वसाधारणका लागि प्रहरीले १०३ र १०० सम्पर्क छुट्याएको छ। जसमा सम्पर्क गरेर आफ्नो नाम र काम टिपाए आवतआवत गर्न सकिन्छ।
लुकीछिपी उपत्यकामा भित्रिन नदिन कडाइ
काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने सवारीसाधन र मानिसको आवागमन रोक्न स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले थप कडाइ थालेको छ।
काठमाडौँ बाहिरबाट उपत्यकाभित्र धमाधम मानिस लुकेर आउन थालेको खबर आएपछि वास्तविकता बुझ्न स्थलगत अनुगमन गरिएको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम ढकालले बताए। उनले त्यसरी लुकेर भने मानिस नआएको पाइएको बताए।
अहिले प्रहरीले अत्यावश्यक सामान बोकेका सवारी र स्वास्थ्य उपचारसँग सम्बन्धित गाडीलाई मात्रै उपत्यका भित्रिन दिएको बताएको छ ।
One thought on “सडकमा ‘जाम’ छ, घर बस्नेलाई लकडाउन !”
this type of news and pictures creats confusions and dilemma to public. For different purpose people need to move eg journalists in large numbers, food, medicine, people for pharmacy drug supply, water, communications etc etc. the photograph you presented are for police checks. vehicle can not transmit the disease it is human being specially there hands transmits the disease if they had touch their nose or they spits or coughs or produce nasal secretion.
I request you all to beaperfect and good but nota“Patrukar”.